५० ला**ख तिर्न न*सक्दा डिआइजी हुन पाइएन- यादवराज खनाल, पूर्वएसएसपी! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
५० ला**ख तिर्न न*सक्दा डिआइजी हुन पाइएन- यादवराज खनाल, पूर्वएसएसपी!
– म धनुषामा हुँदा पत्रकार उमा सिंहको ह**त्या भयो । तीन दिनदेखि लाश उठिरहेको थिएन । त्यतिखेर कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सिडिओ कार्यालयमा ‘कमिटमेन्ट गरिदिनुस् म अपराधी पत्ता लगाएरै छाड्छु भनेर, अनि लाश उठ्छ’ भन्नुभयो । मैले कमिटमेन्ट गर्नु भनेको अपराधी लुकाउनु हो । कमिन्टमेन्ट गर्दिनँ किनकि मैले अपराधी लुकाएको छैन । तर, अहोरात्र खटिएर एक महिनाभित्र यो केशको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सकिनँ भने नेपालको नालायक एसपी भन्नुस्, एक महिना एक दिनभित्र जनकपुर छाडेर जान्छु भनेको थिएँ । यादव थरका मुख्य योजनाकार जो, फरार छन् । तिनको भाउजु, बुदन महतो, नेमलाल पासवानलगायत यसमा संग्लग्न व्यक्तिहरुलाई १६ दिनभित्रैमा पक्रियौं । अपराध अनुसन्धानमा हतार गर्नु हुँदैन । बलात्कार भयो, प्रमाणले पुष्टि गर्ने हो । जहाँ भिडको दबाबमा अनुसन्धानकर्ताले छिट्टै रिजल्ट निकाल्न खोज्छ, त्यहाँ असफल हुन्छ । निर्मला काण्डमा राज्यलाई प्रेसर भयो । प्रहरीले हतार ग¥यो । भेजिनल स्वाब र डिएनए टेष्ट गराउनेबाहेक अरु प्रमाण त केही छैन । एक्सपोज गर्नलाई हतार भएका कारण यस्तो भयो । मान्छेहरु अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर सोध्छन् । उमा सिंहकै केशमा मलाई प्रश्न राख्थे । म ढल्केबर पुग्यो भनेर जवाफ फर्काउँथें । अनुसन्धान किलोमिटर, मिटरमा नापिने कुरा होइन । हामी जति हतार गर्छाैं, त्यति नै अनुसन्धान अप्ठ्यारोमा पर्छ ।
Previous चराले गुँड बनाउने गरी गुजु*ल्टिएको तार हट्छ, चि*टिक्कको शहर बन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
Next पुरा पढ्नुहोस्! किन भने कमल थापाले MCC नेपालको हितमा !